Gamer တွေ လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ 2021ရဲ့ အကြီးမားဆုံး Steam Summer Sale | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Valve လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Lord Gabe ကြီးကိုပြေးမြင်ကြတဲ့ Gamer ညီအစ်ကိုတွေ ရှိလား? ရှိလား? Next Level Marketing Skill တွေနဲ့ ဒီတစ်ခါမှာလည်း လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ Steam Summer Sale ကြီးက ထပ်ရောက်လာပါဦးမယ်။
Summer Sale ဆိုတာ Gamer တွေစောင့်မျှော်နေတတ်တဲ့ Event ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခေါက် Sale က အရင်ကနဲ့မတူတဲ့အပြင် အကြီးမားဆုံး Summer Sale တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Steam က လွန်ခဲ့တဲ့ 2019နဲ့ 2020 ခုနှစ်တွေမှာ Steam Spring Sale ကို မရောင်းချခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီနှစ် Sale မှာ Steam ကသူတို့ရဲ့ Gameပေါင်း (100) ကျော်ကို Discount ပေးသွားမယ်လို့လည်း ကြေညာထားပါတယ်။
Summer Sale မလာခင်မှာ အမြည်းအနေနဲ့ Open World Sale မှာ Little Nightmares လို ဆော့လို့အရမ်းကောင်းတဲ့ Gameအချို့ကိုလည်း Free တွေ/Discount တွေ ပေးထားပါသေးတယ်။ ဝမ်းသာစရာတစ်ခုက အရင်ကဆို Steam က Sale တွေကို ကြိုမကြေညာထားဘဲ အနားနီးမှ Sale ချတတ်တာပါ။
Gamer တွေအတွက် June လကတော့ လုံးဝပျော်စရာကြီးဖြစ်နေမှာပါ။ တစ်ခုရှိတာက ပြီးခဲ့တဲ့ Open World Sale တုန်းက May (27)ရက်နေ့ကနေ (31)ရက်နေ့ထိပဲ ကျင်းပခဲ့တာဆိုတော့ ဒီတစ်ခါလာမယ့် Summer Sale ကိုလက်မလွတ်ရအောင် ကောင်မလေးရှိတဲ့သူတွေကတော့ ဝယ်ပေးဖို့ ကြိုပူဆာထားလိုက်တော့နော်။ ကောင်မလေးမရှိတဲ့ FA တွေကတော့ GGပါပဲ။
June (25)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် Valeရဲ့ အကြီးမားဆုံး Summer Sale ကြီးမှာ အရင်နှစ်တွေကလို ဘယ်လို Update တွေနဲ့လာမလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ အရင်နှစ်ကဆို Steam ကသူတို့ရဲ့ Game တွေကို ဝယ်ရင် Steam Point တွေပေးပါတယ်။ Steam Pointတွေနဲ့ Steam Profileမှာ new animated stickers၊ chat effects၊ profile backgrounds၊ mini-profile backgrounds၊ avatars၊ avatar frames၊ profile backgroundsနဲ့ emoticons associated with your favourite games လိုမျိုး Features တွေရရှိခဲ့ပါတယ်။
Dota2ဆော့တဲ့သူတွေဆို 2020 May (25)မှာ The International 10 Battle Pass ထွက်လာပြီး Steam မှာ Wallet နဲ့ဝယ်တိုင်း သို့မဟုတ် Battle Pass Level တင်ဖို့ဝယ်တိုင်းမှာ Steam Point တွေရရှိပါတယ်။ Steam Pointတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Steam Profile မှာ Feature တွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ အလှဆုံး Update ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် July (9)ရက်နေ့မှာ ပြီးမယ့် Valve ရဲ့ Game ပေါင်း (100)ကျော် Discount ပေးမယ့် အကြီးမားဆုံး Steam Summer Sale မှာ Game အကြမ်းကြီးတွေကိုဝယ်ယူပြီး Gaming Life ကြီးမှာ သာသာယာယာ Chillရင်း ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။
Mandalay Trend Read 108 times